Oru Pakka Kathai (2020) | MM Movie Store
Oru Pakka Kathai (2020)ဒီတဈခါတော့ ခဈြကွိုကျကှဲညား ဇာတျလမျးမဟုတျတဲ့ထူးခွားတဲ့ ဇာတျလမျးလေး တဈကားကို တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။သာမနျဆိုရငျ အမြိုးသမီး နဲ့ အမြိုးသား နှဈဦး သံဝါသ ပွုမှ ကိုယျလေးလကျဝနျ ဖွဈကွတာကလား?????
ဒါကတော့ အမြိုးသားနဲ့အမြိုးသမီး သံဝါသမပွုဘဲအမြိုးသမီးတဈဦးတညျးကနေ အလိုလို ပဋိသန်ဓတေညျလာတဲ့ ဇာတျလမျးပါ။ဆရာဝနျတှရေဲ့ သိပ်ပံနညျးကြ လလေ့ာခကျြတှေ အရ ဖွဈနိုငျတယျလို့ ယူဆကွသလို ….ဘာသာရေးသမားတှကေလညျး တမနျတျောရယျလို့ ယူဆကွတဲ့ အခါမှာတော့ ……
IMDb – 7/10 ရထားတဲ့ ဇာတျကားမို့ ဇာတျလမျး ပွီးဆုံးခြိနျထိ မြောပါသှားအောငျ ချေါနိုငျမယျ့ ဇာတျလမျးတဈပုဒျပါပဲ။
Oru Pakka Kathai (2020)ဒီတစ်ခါတော့ ချစ်ကြိုက်ကွဲညား ဇာတ်လမ်းမဟုတ်တဲ့ထူးခြားတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေး တစ်ကားကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။သာမန်ဆိုရင် အမျိုးသမီး နဲ့ အမျိုးသား နှစ်ဦး သံဝါသ ပြုမှ ကိုယ်လေးလက်ဝန် ဖြစ်ကြတာကလား?????
ဒါကတော့ အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီး သံဝါသမပြုဘဲအမျိုးသမီးတစ်ဦးတည်းကနေ အလိုလို ပဋိသန္ဓေတည်လာတဲ့ ဇာတ်လမ်းပါ။ဆရာဝန်တွေရဲ့ သိပ္ပံနည်းကျ လေ့လာချက်တွေ အရ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ယူဆကြသလို ….ဘာသာရေးသမားတွေကလည်း တမန်တော်ရယ်လို့ ယူဆကြတဲ့ အခါမှာတော့ ……
IMDb – 7/10 ရထားတဲ့ ဇာတ်ကားမို့ ဇာတ်လမ်း ပြီးဆုံးချိန်ထိ မျောပါသွားအောင် ခေါ်နိုင်မယ့် ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ပါပဲ။
The Magicians – Season 1 (Episode 5)
Total Domain Yua Mikami – Link 2